အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ . . . . . . . . ။ (- Wall -)
နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ . . . . . . . . ။ (- Wall -)
အကယ်၍သာ နံရံများသာ စကားပြောနိုင်ခဲ့ပါလျှင် သူတို့ မည်သည့် အကြောင်းအရာများကို ပြောပြလေမလဲ? ထို့အတူ သူတို့အပေါ်မှာရော တစ်ဦးတစ်ယောက်ခြင်းဆီက မည်သို့များ မြင်ကြလေသလဲ? နံရံများသည် အရံအတား တစ်ခုလေလား။ အကာအကွယ် တစ်ခုလေလား။ အပိုင်းအခြား တစ်ခုလေလား။ ရုပ်ဝတ္ထုတစ်ခု အပေါ်တွင်ပင် ကောက်ချက်တစ်ခု ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ချလိုက်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှသည်။ နံရံတစ်ခု၏ အခြားတစ်ဖက်၌ အနက် အဓိပ္ပါယ်တို့က တာသွားလွန်းလှသည်။ ပင်ကိုယ် ၀ိသေသလက္ခဏာများ ရှုပ်ထွေးလွန်း၍တော့ မဟုတ်လောက်ပါ။ တစ်ထစ်ချ ပိုင်းခြားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ကျယ်ပြန့်လွန်း၍ ဖြစ်ပေမည်။ ရုပ်ဝတ္ထု နံရံများ၊ စိတ်တံတိုင်း နံရံများ။ သေချာသည်မှာ နံရံများစွာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ် ထိတွေ့ နေရသည်။ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသော နံရံများ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့သည်...။
နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ - ၁
ပညာရပ်တစ်ခုကို လေ့လာခါစကတော့ ရိုးရှင်းစွာ မှတ်သားခဲ့ဖူးသည်။ နံရံများသည် ဟင်းလင်းခွင် နေရာတစ်ခုအတွက် ပိုင်းခြားထားသော အရံအတားတစ်ခု။ အပြင်ဟင်းလင်းခွင်မှ အတွင်းဟင်းလင်းခွင်ကို ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်သွားသည်အထိ ပိုင်းခြားပေးသည်။ တစ်ဆင့်တက်၍ မှတ်သားမိလာတော့ အရိုးထည် နံရံများစွာကို သတိထားမိလာသည်။ ၄င်းကိုမှ အတွင်းနံရံများ၊ အပြင်နံရံများ၊ ၀န်ထမ်းနံရံများ စသည်ဖြင့်။ သီးခြားတန်ဖိုးဆီ၊ သီးခြားအနက်အဓိပ္ပါယ်ဆီ၊ သီးခြားရပ်တည်မှုဆီနှင့်။ အမှန်တကယ်ပင် ကျွန်တော်တို့သည် နံရံများကို စနစ်တကျ ဖွဲ့တည်၍ နံရံများ အတွင်းတွင် နေထိုင်နေသည်လေ။ ထို့အတူ အခြေအနေ၊ အချိန်ကာလ၊ ခေတ် နှင့် သမိုင်းပေါ်မူတည်၍လည်း နံရံများ၏ တန်ဖိုးသည် ကွာခြားသွားသေးသည်။
Great Wall of China, Western Wall , Walls of Babylon, Sacsayhuamán, Great Zimbabwe Walls, Berlin Wall, Hadrian's Wall, Walls of Troy, Veterans Memorial Wall, Wall of Ston စသည်တို့မှာ သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော နံရံများဖြစ်သည်။ အများစုမှာ တစ်ချိန်တစ်ခါက နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွက် Boundary Wall များ၊ Separation Wall များအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြသော နံရံများ ဖြစ်သည်။ နံရံတို့၏ ဇာတိသရုပ် သို့မဟုတ် နံရံတို့၏ကြန် အကြောင်းကို ဆရာကြီး ဒေါက်တာလွင်အောင် ၏ ဗိသုကာလက်ရာ စာအုပ်တွင်တော့ ယခုလို မှတ်သားရပါသည်။
" ပြင်ပဟင်းလင်းမှ အတွင်းဟင်းလင်းတို့ကို ပိုင်းခြားခြင်းသည် တစ်နည်းဆိုရလျှင် ဟင်းလင်းခွင်အား ခွဲခြားပေးခြင်း ဖြစ်၏။ တစ်သားတည်း ဖြစ်ခဲ့သည့် ဟင်းလင်းကို ကွဲပြားစေရန် ဖန်တီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပ၏ ဟင်းလင်း၌ရှိသည့် အာဝါသ (External atmosphere) အား အတွင်း၌ရှိသည့် အာဝါသ (Internal atmosphere) နှင့် ခြားနားစေရန် နံရံအလွှာဖြင့် ခြားဆီးပေးခြင်း ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် နံရံအလွှာ၏ နှစ်မျက်နှာရှိ အပြင်အဆင် (the motifs)၊ အခင်းအကျင်း (the themes) တို့၏ ကြန်အင်သည် အလွန်ပင် အရေးပါပေသည်။
နံရံတစ်ခု၏ ဘောင်အနားသတ်မျဉ်းသည်လည်းကောင်း၊ ယင်း၏ မတ်ရပ်အနိမ့်အမြင့်သည်လည်းကောင်း၊ နံရံ၏ ထုအထူသည်လည်းကောင်း ယင်းနံရံ၏ ဇာတိသရုပ်ပင်ဖြစ်ပေသည်။
နံရံ၏ ထုအထူသည် တောင့်တင်းခိုင်မာဖြင်း၊ လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်း ရသမျိုး ခံစားရစေဖို့ ပါရှိနေသည့် ကိုယ်ထည် ဒြပ် ကြန်အင်များ ဖြစ်သည်။ နံရံ၏ ထုအထူ ပါးလွှာခြင်း၊ အပေါက်များစွာ ပါရှိခြင်း၊ အလင်းပေါက်သည့် မှန်ချပ် ဧရိယာနည်းခြင်းနှင့် များခြင်း စသည်တို့သည် နံရံတစ်ခု၌ ပါရှိနိုင်သော ကြန်အင်များပင် ဖြစ်ပေသည်။ နံရံမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အရောင်အသွေး (Color and tone)၊ ဗြုပ်ပွေးကြမ်းချော (Texture) ၊ အဖောင်းအပိန် (Plasticity) စသည်တို့သည်လည်း ယင်း၏ ကိုယ်ထည်ဒြပ် ကြန်အင်ပင် ဖြစ်ပေသည်။ သို့သော ယင်းတို့မှာ ဇာတိသရုပ် (Expression of substance) များ မဟုတ်ကြပါ။ ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသော အခင်းလွှာ၊ အကာလွှာ၊ တင်းထိမ်လွှာ သဘောသာ ပါရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြပေသည်။ "
ကျွန်တော်တို့ နံရံများကို အရံအတားတစ်ခုအဖြစ်သာမဟုတ်။ အခြား လိုအပ်ချက်များစွာဖြင့်လည်း အသုံးပြုသေးသည်။ အရိုးရှင်းဆုံးသည် Building walls ဟုခေါ်သော အမိုးထည်နှင့် မျက်နှာကျက်ကို အဓိက ထမ်းထားပေးမည့် နံရံများ အထူးသဖြင့် Partition များ ဖြစ်မည်။ ၀န်ထမ်းဖို့ထက် insulation လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်သည်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလိက pravicy ရှိဖို့အပြင် structural stability , Sound control, Thermal control, Fire resistance, Environment concern လုပ်ဖို့လည်း ပါသည်။ ထိုလိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင်မှာ ကွန့်၍ကွန့်၍ မျက်စိပဒသ ဖြစ်အောင် ဒီဇိုင်းများ အမျိုးမျိုး ဖန်တီးလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင် ဖန်တီးဖို့ထက် ခိုင်ခံ့သေသပ်အောင် ဖန်တီးရသော နံရံများလည်း ရှိသေးသည်။ Retaining Wall များ၊ Sea Wall များ အစရှိသည့် နံရံများအနေဖြင့်မူ သူတို့၏ ၀ိသေသကိုယ်နှိုက်က soil သို့မဟုတ် water တို့၏ movement နှင့် settlement ကို ခံနိုင်ဖို့၊ ၀န်ထမ်းဖို့ ဖြစ်သည်။ ကြံခိုင်ခြင်းသည် သူ၏ အလှတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပေမည်။
ရုပ်ဝတ္ထုနံရံများသည် ဖန်တီးရလွယ်ကူသည်၊ လေ့လာရ လွယ်ကူသည်၊ သုံးသပ်ရ လွယ်ကူသည်လား။ မခက်ခဲသော်လည်း အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ နက်နဲမည်ထင်သည်။
နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ - ၂
နံရံများ အမျိုးမျိုးတွင်မှ အနီးကပ် ထိတွေ့နေရသည့် interior wall များကို စိတ်ဝင်တစားလိုက်ကြည့်မိသည်။ Interior wall များနှင့် partition များသည် ဟင်းလင်းခွင်တစ်ခုအတွက် vertical division တစ်ခုအဖြစ် တည်ရှိနေသော element များဖြစ်သည်။ ဖန်တီးသူအကြိုက် တစ်ချို့နံရံများကတော့ ကွေ့ကာဝိုက်ကာ၊ ယိမ်းကာယိုင်ကာ။ ယေဘူယျအားဖြင့် အဆောက်အဦး သက်တမ်းနှင့်အတူ တည်ရှိသွားမည့် permanent partition များ၊ လိုအပ်မှုအပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းရွှေ့နိုင်သော changeable partition များဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်လေသည်။ ခိုင်ခံမှု stability ရှိရန်နှင့် aesthetic ဖြစ်အောင် ဖန်တီးခြင်းသည် အဓိကကျသော အချက်ဖြစ်ပေမည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးတစ်ခုအပြင် အသံနှင့် အလင်း အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ fire safety အတွက်ပါ အဓိက စဉ်းစား၍ တည်ဆောက်ကြရသည်။ Vision , Sound Control, Fire Safety, Heat Flow, Radition များအပေါ် မူတည်၍ Partition type များကို သီးခြားခွဲထုတ်လိုက်လျှင် Framed type, Solid laminated type, Relocatable type, Operable portable type, Stacked type, Monolitic type ဟူ၍ ရလေသည်။ နံရံများကို ကြည့်ရင်း မှတ်ဥာဏ်၏ အသိထဲ ထိုထိုအကြောင်းအရာများကို မှတ်သားခဲ့ဖူးကြောင်း အမှတ်ရမိသည်။
သို့သော်လည်း နံရံများအကြား နေထိုင်သူအများစု တွေးကြမည်မှာ နံရံများကို မြင်တွေ့ရမည့် နောက်ဆုံးအခြေအနေ တစ်နည်းအားဖြင့် wall finish များ ဖြစ်ပေမည်။ Gypsum Board, Plaster, Wood panelling, Stone wall panels and tiles, Paints and stains, Wallcoverings စသည်ဖြင့် အခြားအခြားသော wall finish များစွာသည် ကျွန်တော်တို့၏ လိုအပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ခံမည့် material များဖြစ်ပေမည်။ Vinyl, Textile, Wallpaper, Fiberglass နှင့် Wood Veneer စသော Wall covering များစွာလည်း ရှိသေးသည်။ နံရံများ အတွင်းမှာ နှစ်လိုပျော်ဝင်စွာ နေထိုင်ဖို့ နံရံများကို စနစ်တကျ ဖွဲ့တည်ဖို့တော့ လိုအပ်မည် ထင်သည်။
နံရံများအား ဆေးသုတ်အလှဆင်ဖို့ သန်းနှင့်ချီသော အရောင်အသွေးများစွာက ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်ခိုင်းသည်။ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး ဖန်တီးမှုအထွေထွေဖြင့် ဆန်းသစ်နေသော texture များအပေါ်မှာလည်း ရင်ခုန်နိုင်သေးသည်။ နံရံများကို ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းသို့ " an extra dimension" တစ်ခု အနေနှင့်လည်း ခေါ်သွင်းနိုင်သေးသည်။ ဥပမာဆိုရင်လျှင် WallArt က မိတ်ဆက်ပေးသော "WallArt 3D wall pane" များကို ကြည့်နိုင်သည်။ အချိုဓါတ် စုပ်ယူပြီးဖြစ်သော ကြံချောင်းများ၏ အမျှဉ် (fibres of crushed sugarcane stalks) မှ ကုန်ကြမ်းရယူ၍ ထုတ်လုပ်ထားသော နံရံများ ဖြစ်သည်။ 100% recycled နှင့် 100% biodegradable ဖြစ်သော raw material တစ်မျိုး ဖြစ်သောကြောင့် eco-firendly ဖြစ်လာခြင်းသည် WallArt ၏ ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပေမည်။ Green Technology ဆိုသော စကားလုံးနှင့်အတူ Reduce, Reuse, Recycle ဖြစ်ဖို့ အလေးထားလာသော ယနေ့ခေတ်တွင် နံရံများကို ဖန်တီးသော နည်းပညာများနှင့် နံရံများအကြား နေထိုင်ခြင်းများသည် ပိုမို ဆန်းသစ်လာခဲ့သည်လား။
လူအမျိုးမျိုး၊ စိတ်အထွေထွေ၊ ဒီဇိုင်းများ ဆန်းနိုင်သမျှ အဆန်းဆုံး၊ ပြောင်းလဲတိုးတက်လာသော Material များစွာနှင့် အတွင်းနံရံဒီဇိုင်းများသည် ကျွန်တော်တို့ကို ညှို့ငင်နေမည်လား။ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်နှိုက်ကပင် အသစ်အသစ်သော တစ်မူထူးခြားသော နံရံများအကြားဝင် နှစ်လိုပျော်ဝင်နေမည်လား။ စနစ်တကျ တည်ဆောက်ထားသော နံရံများ အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့သည်...။
နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ - ၃
Beijing ရှိ Kengo Kuma ၏ Great Bamboo Wall များကတော့ ထူးခြားလွန်းလှသည်။ သေးသွယ်သော ၀ါးတိုင်များသည် အုတ်နံရံများ၊ ကျောက်နံရံများနေရာမှာ။ ၄င်းတို့အကြား အလင်းလိုင်းများနှင့် လေပြည်လေညင်းတစ်ချို့က ညင်ညင်သာသာ ထွင်းဖောက် ၀င်လာသည်။ ၀ါးသည် ဂျပန်လူမျိုးနှင့် တရုတ်လူမျိုးတို့ အထူးနှစ်သက်သော ပစ္စည်းဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ သဘာဝအတိုင်းဖြစ်သော ၀ါးတိုင်များဖြင့် စနစ်တကျ ကာရံထားသော ပိပိပြားပြား Great Bamboo Wall အိမ်လေးတွင် ထိုလူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု ရနံ့များ သင်းထုံနေလေသည်။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ယှက်နွယ်ထားသော်လည်း ခံ့ညားမှု၊ ထည်ဝါမှု၊ အထင်ကရဖြစ်မှုမျိုးမဟုတ်။ သဘာဝကို ချစ်ခင်သော သဘာဝနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျနေသော ၀ပ်ဝပ်ပြားပြား အိမ်ငယ်လေးသာ ဖြစ်သည်။ အိမ်လေးအတွင်းမှာ၊ လှေကားလမ်းများမှာ၊ မျက်နှာကျက်များမှာ၊ ကြမ်းခင်းများမှာ ၀ါးတိုင်လေးများသည် ဒေါင်လိုက်ပြေးလိုက်၊ အလျားလိုက်ပြေးလိုက်နှင့်။ Asian architect တစ်ဦး၏ ဖန်တီးမှုဖြစ်သည်နှင့်အညီ အရှေ့တိုင်းဆန်သော အတွေးအခေါ်များကတော့ အိမ်ကလေးမှာ လွင့်ပျံ့နေလေသည်။
နံ ရံ များ အ တွင်း မှာ - ၄
နံရံများကို လိုက်ကြည့်နေမိသည်။ နံရံများသည် ထူထူထဲထဲ၊ သိပ်သိပ်သည်းသည်း၊ မြင့်မြင့်မားမား။ အချို့နံရံများသည် ဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်သည်။ အချို့နံရံများတွင် ထွင်းဖောက်ထားသော ပြတင်းတံခါးများရှိသည်။ မည်သို့ဆိုစေ နံရံများသည် နေထိုင်မှု အနုပညာ တစ်ခုကို ပို၍လှပလာစေသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် ရုပ်ဝတ္ထု နံရံများသည် ဖန်တီးရ လွယ်ကူသည်၊ လေ့လာရ လွယ်ကူသည်၊ သုံးသပ်ရ လွယ်ကူသည်လား။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းများအကြား ပိုင်းခြားထားတတ်သည့် နံရံများကတော့ မတူကွဲပြားပေမည်။ လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်၊ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့၊ သီးသီးသန့်သန့်၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း။ သို့မဟုတ် ကြည်ကြည်လင်လင်၊ နွေးနွေးထွေးထွေး၊ နူးနူးညံ့ညံ့။ အရံအတားလေလား၊ အကာအကွယ်လေလား၊ အပိုင်းအခြားလေလား။ သို့တည်းမဟုတ် မှန်တစ်ချပ်လေလား။ သေချာသည်မှာ စိတ်နံရံများကြိုဖင့် မှန်းဆရ ခက်လွန်းလှပေမည်။ အကယ်၍သာ စိတ်တံတိုင်း နံရံများကို လှမ်း၍ စကားလှမ်းပြောလိုက်လျှင် ရုပ်ဝတ္ထု နံရံများကဲ့သို့ ပဲ့တင်သံတစ်ချို့ ပြန်လာခဲ့မည်လား။ မိမိပြောခဲ့သည့်အတိုင်း မိမိဆီပြန်လာသည့် အသံလေလား။ ကိုယ်တိုင်ပဲ အသိဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
နံရံများသည် သည်မှာ။ နံရံများသည် ဟိုမှာ။ ကြည့်၍မြင်သည့် နံရံများ၊ ကြည့်၍မမြင်သည့် နံရံများ။ နံရံများကတော့ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေခဲ့သည်။ နံရံများအတွင်းမှာ စိတ်ကို ဖြန့်ကြည့်မိသည်။ စိတ်သည် နံရံများကို ကျော်လွန်ခဲ့သည်လား။ နံရံများသည် စိတ်ကို လှောင်ပိတ်ထားနိုင်စွမ်းတော့ ရှိမည်မထင်။
Reference တစ်ချို့ကို ဒီကနေ ယူပါတယ်...။
ဒေါက်တာလွင်အောင် - ဗိသုကာ လက်ရာ
Facebook က Wall တွေမှာလည်း အတွေးများစွာ ရရှိနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်း) ။ အချိန်မကုန်အောင်တော့ ဂရုစိုက်ရပါဦးမယ်။
Facebook က Wall တော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ Games တွေက လက်ဆောင်တွေရလို့။ :P
ဟွန့်.. life isaplaying game ဆိုတာကို အခွင့်ကောင်းယူနေတယ်....။
ဗဟုသုတတွေရယူသွားပါတယ်ကွယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတယ်။ မျှဝေပေးတာကျေးဇူးပါ။ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေ။
နံရံဆိုတာ စည်းဘောင်တစ်ခုအနေနဲ့ လိုအပ်သလို အကာအကွယ်အနေနဲ့လည်း လိုအပ်တယ်နော် ။။ နံရံအမျိုးမျိုးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ ရှိနေတာ အံ့သြစရာဘဲ ။ စိတ်ဝင်စားမိတယ်